TORITENY Alahady 02 Jolay 2017 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 02 Jolay 2017
« Manaiky ho vavolomelon’ny Tompo ny irany. »
Jer 26 : 8-15 / Jao 20 : 21-23 / Asa 50: 17-23
Ny andrasan’Andriamanitra amin’ny mpanompony dia ny ho olona manaiky sy mankato ny Ilay naniraka azy , ary resy lahatra fa tena voafidin’Andriamanitra manokana.
Inona no tena manamarika ny olona nandray iraka avy amin’Andriamanitra ?
I- Mitondra ny hafatr’Andriamanitra madio sy feno
Sahy milaza ny hafatra avy amin’Andriamanitra feno tsy anampiana tsy analàna na dia mety hifanohitra amin’ny sitrapon’ny tenany sy izay mihaino azy aza izany ; satria Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona
Ireo hafatr’Andriamanitra nasaina nambaran’ny Jeremia mpaminany .
a) Mitory ny hafatr’Andriamanitra amin’ny fahadiovana sy ny fahamarinana
Ny olon’ny fanjakan’Andriamnitra dia manankina tanteraka ny fiainany amin’Andriamanitra , tsy manana Tompo hafa ianteherana eo amin’ny fiainany andavan’andro afa-tsy Jehovah Andriamanitra irery ihany . Nirahina noho izany i Jeremia hitarika ny Zanak’Isarealy hanankina tanteraka ny fiainany amin’Andriamnitra ary hanaiky sy hankato ny sitrapon’Andriamanitra .. cf Jer 26 : 2
b) Mitaona ny olona ho amin’ny fiainam-pibebahana
Tsy misy mahazo miditra ny fanjakan’Andriamanitra raha tsy mahatsiaro fa tafasaraka tamin’Andriamanitra noho ny tsy fanarahana ny sitrapony ka mila manapa-kevitra hiverina tanteraka ao amin’Andriamanitra. Hiova amin’ny amin’ny fanavaozana ny saina ka hamantatra izay tsara sady ankasitrahana eo imason’Andriamanitra. Solon-tenan’Andriamanitra i Jeremia hitaona ny Zanak’Israely ho amin’ny fiainam-pibebahana.
cf Jer 26 : 3-4
c) Manambara ny famelan-keloka
Rehefa nanapa-kevitra hahafoy ny lalan-dratsiny ny olona ka hiverina ao amin’Andriamanitra dia vita fihavanana amin’Andriamanitra , ary mahazo ny famelan-keloka mba hananany fiainana tsara lavitra noho ny famindram-pon’Andriamanitra . Solon-tenan’Andriamanitra hanome famelan-keloka ny mpanompony. “Na helok’iza na helok’iza no avelanareo dia voavela izany …” cf Jao 20 : 23
II- Sahy mijoro na dia hiafara amin’ny fahafatesana [Jer 26 : 14]
Na dia samy nahatsiaro fa nandray iraka avy amin’Andriamanitra aza ny mpanompony ; dia misy ny miala andraikitra manolona ny zava –tsarotra na koa izay mety tsy hifanaraka amin’ny sitrapony amin’ny maha olombelona azy . cf Jona . Marisarisa amin’ny fanoloran-tena, ny fahafoizana fotoana amin’ny asa fanompoana sy ny asa fampandrosoana maro samihafa. Fitaratra tsara ho an’ny Kristiana Rasalama Martiora , na dia hiafara hatramin’ny fahafatesana aza dia tsy nivadika tamin’Andriamanitra. Ny anjaran’ny mpanompo nandray iraka dia ny manaiky fotsiny ho fitaovam-piasana eo am-pelatanan’Andriamanitra fa an’Andriamanitra ny miantoka ny sisa amin’ny fiainana manontolo. “Ny fiadanana ho anareo…… “Jao 20 : 21
Nahatsiaro fa nandray iraka avy amin’Andriamanitra aho, dia manapa-kevitra fa :
Hitaona ny tenako, ny ankohonako ary ireo ondry nomen’Andriamanitra ho tandremako, hanankina tanteraka ny fiainana amin’Andriamanitra, hanambara amin’ny fahadiovana sy ny fahamarinana ny sitrapon’Andriamanitra mba ahazoana miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Hitaona azy ireo ho amin’ny fiainam-pibebahana ka mamerina azy ireo amin’ny lalana nosoritan’Andriamanitra tokony hizorana dia ny lalan’ny fahamarinana (fiainana ao amin’i Jesoa Kristy)
Hanonona ny famelan-keloka ho an’izay mibebaka marina.
Tsy hitsitsy ny aiko fa hanana faharetana amin’izay efa nanolorako tena na dia hiatra aman’aina aza, foiko ny tenako , fotoanako , vola aman-karena , fahaizana amam-pahalalana ho amin’ny fanatanterahana izay andraikitra napetrak’ Andriamanitra tamiko.
Mahatoky fa tsy hanary ahy mandrakizay ny Tompo raha tena miasa amin’ny tahotra sy ny hovitra aho , satria hoy Izy “Mpanompoko ianao , efa nofidiako ka tsy mba hariako “
ANDRIANARISON Hajaniana Célestin, Mpitandrina
Catégories :	Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 12 juillet 2017